प्रधानमन्त्रीलाई शारदाको व्यंगात्मक पत्र – खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्रको अवहेलना गरे कारवाही गर्नुस | Samabesi Khabar
प्रधानमन्त्रीलाई शारदाको व्यंगात्मक पत्र – खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्रको अवहेलना गरे कारवाही गर्नुस
मितिः२०७६।०७।२५ गते सोमबार
श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु
विषयः म उपर हदै सम्म कारवाहीको माग गर्दछु ।
प्रधानमन्त्री ज्यु मलाई कारवाही होस्, हदै सम्मको कारवाही होस् मैले गर्नु नगर्नु गरे हजुरले खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै हजुरले गरेको घोषणाको अवहेलना गरें लौन मलाई हदै सम्मको कारवाही गरियोस् । हातमा हतकडी लगाएर जेलमा कोचियोस् । म जस्तो अपराधीलाई दण्ड सजायँ र जरिवाना गरियोस् ।
मैले कात्तिक १३ गते जनकपुर देखि हेटौडासम्म सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा आफुलाई सम्हाल्न सकिन । बिहानको सिरेठोमा पाँचै बजे गाडीमा बसियो । ६ बजे जनकपुरबाट हिंडेको बसले यात्रु चढाउनमात्र बस रोक्छ नत्र बसै रोक्दैन । कति जंगल आए कटे तर बसले दिशा पिसावको लागि गाडी फिटिक्कै रोक्दैन । पिसावले च्यापेको छ सहनै नसक्ने गरी अनी आँखाबाट आँसु आउँछ घरी घरी कन्टेक्टरले भन्छ खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको छ गाडी रोक्न मिल्दैन । घरी टाउको समाएर घोप्टीन्छु घरी मनलाई यता उता डुलाउँछु तर अहँ म सम्हाल्न सकिरहेकी छैन । सिट पनि गाडीको चक्कामाथी कै परेछ १० नम्वर अनी घर्रघर्र घरघरघर गर्दै भाइव्रेसन जस्तै गर्छ तर पनि मेरो अवस्था हजुरले कसरी पत्याउनु हजुरलाई यात्रा गर्न परेको भए प्रधानमन्त्री ज्यु ? म जस्ता दैनिक यात्रा गर्ने लाखौं यात्रीहरुको भावना पिडा कष्ट यहाँले बुझ्न सक्नु हुन्थ्यो होला तर यहाँ मेरो अवस्था चिन्ताजनक भई सकेको छ । दुवै खुट्टा जोडले सिटतिर धकेली रहेकी छु आफुलाई सिटको पछाडी च्यापी रहेकी छु तर मैले पिसाव रोक्न सकेकी छैन । मेरो सानो गल्ती भयो भने सिटमै पिसाव हुने पक्का छ । म मुटुको बिरामी कठै, मेरो त्यती बेलाको अवस्था बयान गरी साध्य छैन यस्तो जीवन भन्दा त मर्नु जाति जस्तै लागेको छ । जोडको पिसाव रोकाइको कारण मौसम चिसो हुँदा पनि पसिनाले निथ्रुक्क भिजेकी छु । आँखाबाट आँसु थाम्न सकेकी छैन । पेट फुल्लींदैछ । दुवै मुट्ठी जोडले कस्सिंदैछन । दाँत माथि दाँत जोडले दबिएका छन् ।
समय बित्दै गएपछि घरी यता उता गर्छु अब म मात्र पिसावले थलिएको रहेनछु अरु पनि यसो बोल्न थाले साना साना नानी वावु मामु सुसु गर्ने भन्छन वावा सुसु गर्ने भन्छन कोही मम्मी आची पनि आयो भन्छन तर गाडी रोकिएन । अब लालबन्दी कट्यो बिस्तारै गाडीमा गाईंगुइँ चल्न थाल्यो । एक यात्रुले भने, कन्टेक्टरलाई यात्रु चढाउन हुने, पैसा उठाउन पनि हुने तर सुविधा केहि नहुने ? अघि देखि पिसाव लाग्यो भनेर हल्ला भइरहेको छ भन्दा बसचालक र कन्टेक्टर भन्छन खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ कारवाहीमा परिन्छ तर गाडी रोकिंदैन । अब त मेरो हालत निकै कष्टजनक बन्दै गएको छ गाडी रोकिहाल्यो भने पनि म शायद गाडीबाट ओर्लिन सक्दिन उभियो भने पिसाव कपडामै हुन्छ । म मानसिक र शारिरिक यातनामा गुज्रीरहेकी थिएँ । अब घरी घरी मुखबाट हुर्लुक्क हुर्लुक्क पानि आउन लागी सकेको थियो । यस्तो कठिानइपूर्ण यात्रा कहिले गरेकी थिइन । दुइचारजना युवक उठेर कन्टेक्टरको कठालो समाउँदै तँतँ र मम गरेपछि जनतन एक जंगलमा गाडी रोकियो । सबै यात्रु ओर्लिए म सकि नसकि गाडी बाट ओर्लिंए रक्सि खाएर मातेको मानिस जस्तो धङधङाउँदै जंगलतिर पसें मैले खुला दिशा युक्त गरें प्रधानमन्त्री ज्यु अनि लाग्यो मैले नयाँ जीवन पाएँ ।
मलाई कारवाही नभए कसलाई कारवाही हुने ? म त महाअपराधी हो नी बाटो हिंड्दा दिशा पिसाव लाग्ने । बिचरा मेरो देश दक्षिण एशियामै खुलादिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा हुने सुचिमा पहिलो भएको छ । सार्वजनिक शौचालय नभएपनि ठाउँठाउँमा होर्डिङ बोर्ड ठड्याइएका छन् । जसको मैले कदर गर्नै सकिन । प्रधानमन्त्री ज्यु म संग त्यति पैसा पनि थिएन कि म त्यो बस बाट ओर्लिएर कहिं कतै पिसाव गरेर फेरी अर्को गाडी समाएर हेटौडा पुगौं तर जनतन त्यस दिन हेटौडा पुगें जुन यात्राले मलाई मर्नु न बाँच्नु बनायो ।
होर्डिङ बोर्ड लगाउँदैमा खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कसरी भो प्रधानमन्त्री ज्यु ? यात्रुहरुको पिडालाई यहाँले के कति मनन गर्नु भएको छ छैन हजुर जस्तो अभिभावकले यसरी निर्णय गरिदिंदा जनताको पिरमर्का अब कसले बुझिदिने ? असोज १३ गते खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषण भयो त्यसको ठिक एक महिना पुगकै दिन कात्तिक १३ गते मैले खुला दिशा युक्त गरें । म माथि कारवाही हुनै पर्छ किन भने म बाँच्न चाहें हजुरले दिनु भएको यातना सहन गर्न सकिन मलाई माफी होइन मलाई कारवाही गरिबक्सेला प्रधानमन्त्री ज्यु ।
प्रधानमन्त्री ज्यु, हजुरलाई थाहा छ ? शौचालयको अभावका कारण मानिसले पानि कम पिउँछन ताकि शौचालय खोज्न जान नपरोस् । पानिको कमिबाट धेरै रोगहरु लाग्दछन् जसको शिकार सबै भन्दा बढि महिला हुन्छन यसको महशुस हजुरले कसरी पत्याउने ? किन भने हजुरलाई त सुख सयल, सुविधा छ हामी त देशका मालिक ……….नाथे जनता न परिम…….। मैले जस्तो पिडा अरु पुरुष र महिलाले पनि भोग्छन तर बोल्न मात्र सकेनौ भन्छन त प्रधानमन्त्री ज्यु ।
होर्डिङ बोर्ड पिच्छे दुई चार शौचालय बनाएर खुला दिशा मुक्त बनेको भए गर्व गर्न लायक हुन्थ्यो तर यहाँ त अभिभावकले नै पिशावनली थिचाएर मार्ने योजना षडयन्त्र भएपछि मुख खोल्न बाध्य भएकी छु । म त अपराधी हो बाटोमै पिसाव गर्ने तर प्रधानमन्त्री ज्यु एक पटक महशुस गरेर हेर्नुस त मैले जस्तो अवस्थामा हजुर वा हजुरको श्रीमतीलाई गुज्रीनु परेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? हामी सर्वसाधारण नाथे जनताको पिडा कसले बुझिदिने ? त्यही भएर खुलादिशा युक्त गरेपछि मलाई कारवाही होस भनेर प्रधानमन्त्री ज्युको ध्यानाकर्षण गराउनकालागी यो पत्र लेखेकी हुँ । म जस्तो सुकै सजायँ भोग्न तयार छु ।
प्रधानमन्त्री ज्यु, हामी नाथे मालिक माथि यति ठूलो अन्याय किन ? हामीले हरेक यात्रामा यस्ता कठिनाई भोग्नु परेको छ । धेरै नेपालीहरु सहेर बस्छन तर म मौनतामा दिशा पिसाव च्यापेर बसिरहन र बाँचिरहन सकिन । दिशा पिसाव समयमा गर्न नपाएर निसास्सीएर मर्नु न बाँच्नुको कठिन यात्रा कहिले सम्मको लागि हो ? ७ बजे पिसावले अत्याएको साढे ९ बजे सजाय भोग्न तयार भइ गाडी रोकाउन सफल भइयो । गाडीवालाको कुनै दोष छैन प्रधानमन्त्री ज्यु सबै दोष मेरो नै हो । सार्वजनिक शौचालय नबन्नुमा पनि दोषी हामी नाथे जनता नै हौं त्यसैले मलाई खुला दिशापिसाव युक्त जस्तो भयानक अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गरि हदै सम्मको सजायँ हुनै पर्छ ।
भिजिट नेपाल २०२० शौचालय विनाको खुलादिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर जग हसाई मात्र होइन देशको बेइज्यत हो । नेपालमा सत्य बोल्नेको मुख सिलाइन्छ त्यसैले मैले पहिले नै हदै सम्मको सजायँको मांग गरेकी छु ।
यस पत्रमा लेखिएका हरेक शब्द शतप्रतिशत सत्य हुन् झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
शारदा भुसाल (झा)
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ता